कारागारमा रहेका गोल्डेन डन ‘गारे’ चिन्तित, के छ उनको पछिल्लो अवस्था ? « Nepal's number 1 Entertainment news portal
कारागारमा रहेका गोल्डेन डन ‘गारे’ चिन्तित, के छ उनको पछिल्लो अवस्था ?
Published :2June, 2018 9:49 pm
सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका मुख्य आरोपी चु्डामणी उप्रेती गोरे अहिले चिन्तित रहेका छन् । उनलाइ जिल्ला कारागार मोरङमा राखिएको छ । कारागार प्रशासनका अनुसार उनी अहिले चिन्ति रहेका छन् । गोरेले कारागारमा भेटघाटमा आउने आफन्तहरुसँग निकै कम कुराकानी गर्ने गरेका छन् । उनी जेलभित्र चुपचाप रहने र सधै निराश देखिने गरेको कारागार प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर हुने सुन तस्करीका मुख्य व्यवस्थापक रहेका गोरेको अन्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ । गोरेका कानुन व्यवसायी र आफन्तले नियमित रुपमा उनलाइ भेटिरहेका छन् । ‘अन्य अवस्था सबै सामान्य रहेको छ ।’ कारागार प्रशासन भन्छ,‘उनी पछिल्लो समय भेटघाटमा आउने आफन्तसँग कम बाल्ने गरेका छन् ।’
करीब ३८ क्विन्ट सुन तस्करी र सनम साक्यको हत्याको आरोपमा थुनामा रहेका मुख्य आरोपी मध्ये गोरे र नेपाल प्रहरीका एसएसपी श्याम खत्रि अहिले एउटै जेलमा रहेका छन् । उनिहरु मोरङमा रहेको कारागारमा छन् । कारागार प्रशासनका अनुसार एसएसपी खत्री माथिल्लो तलामा छन् भने गोरे तल्लो तलामा रहेका छन् ।
दुबैलाई एउटै कारागारमा राखिएपछि सुरुक्षा व्यस्था थप मजवुद बनाइएको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
उनीहरुले जिल्ला अदालत मोरङमा एक अर्काविरुद्ध बयान दिएका थिए । एसएसपी खत्रीले इजलासमै आफुलाई गोरेसँगै नराख्न आग्रह समेत गरेका थिए । त्यसैले पनि उनिहरुलाइ एकै ठाउँमा राख्दा असुरक्षा बढ्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाइएको हो ।